“Tallaabooyin muuqda ayaa ka hirgalay qorshayaashii lagu hagaajinayey bilicda magaalada; Duqa Garoowe. – Radio Daljir
Garowe, June 12- Duqa magaaladaa Garoowe C/casiis Nuur Cilmi ayaa maanta ka war-bixiyey waxa uga hirgalay qorshayaal baaxadleh oo lagu hagaajinayey milicda iyo waddooyinka magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Duqa, ayaa sheegay inay ay wax-badani ka hirgaleen tallaabooyinkii cayinnaa ee ku aadanaa Hagaajinta Jidadka waa wayn oo dhex-mara xaafadaha kala duwan ee magaalada Garoowe, kuwaasi oo uu guddoomiyuhu xusay intooda badan in wax la taaban karo laga qabtay.
Mudane C/casiis Nuur Cilmi wuxuu sidoo kale uu sheegay iyana in ay wax badan ka qabteen bilic-samida magaalada kaddib markii ay banneeyeen goobo badan oo si sharci darro lagu degay waxaana dhinaca kale uu caddeeyey in ay baro-cayiman u sameeyeen dadka barakacayaasha ah.
Duqa, ayaa sidoo kale sheegay inay hadda wadaan hindisayaal looga gaashaamanayo qashilka iyo bacaha oo inta badan xilliyada dabayluhu yimaadaan ku soo urura magaalada iyo meelaha dugsiga ah, waxaana uu intaasi raaciyey jiritaanka dardar-galin ku saabsan abuuritaanka dhir lagu beerayo waddooyinka kala duwan ee magaalada.
Tallaabooyinkaan duqu uu ka sheegtay guulo ka gaarista ayaa ah kuwa muddooyinkii ugu danbeeyey maamulkiisa degmadu ay ku hawlanaayeen, loogana gollahaa soo saaridda bilicda magaalada iyo bannaanta waddooyin xirmay.